कुन कित्ताबाट राजनीतिमा आउँदैछन महानायक राजेश हमाल ?
बिहिवार, असोज ३०, २०७६
Thu, Oct 17, 2019 at 12:38pm
धितोपत्र बजारमा झिनो सुधार, कुन कम्पनीका शेयरधनीले कति कमाए ? #आहा खबर# एनटीसीको आकर्षक अफर : १० रुपैयाँमा १०० मिनेट कल, अरू के–के ? #आहा खबर# ४ उद्योगीको विपक्षमा अदालतको फैसला, महसुल उठाउने बाटो खुल्यो #आहा खबर# ट्रम्प र पुटिन नेपाल आए पनि सुरक्षा दिन सक्षम छौं ! #आहा खबर# कतारले तोक्यो कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक, आउँदो जनवरीदेखि लागु हुने #आहा खबर# परिवर्तनमा कहीँकतैबाट खतरा नभई हामी आफैँबाट खतरा हुनसक्छ : अध्यक्ष दाहाल #आहा खबर# नेकपामा सभामुखका लागि ६ जनाको नाम चर्चामा, को को छन् ? #आहा खबर# खानेपानी योजनालाई उपभोक्ताबाट १० करोड जुट्यो #आहा खबर# २८ वर्ष ननाघेका युवालाई वाणिज्य बैंकले निःशुल्क प्रशिक्षण दिँदै #आहा खबर# सिरियाबाट सैनिक फिर्ता नगर्न अमेरिकी सांसदको आग्रह #आहा खबर# विश्व सैनिक गृष्मकालीन खेलकूद प्रतियोगिताको झण्डोत्तोलन, पहिलोपटक नेपाली सेना सहभागि #आहा खबर# ‘छ माया छपक्कै’ पछि दीपक दीपाको नयाँ फिल्म, यस्तो छ नाम #आहा खबर# त्रिविको निजीतर्फको परीक्षा फारम भर्ने समय थप #आहा खबर# म्याग्दीको अर्मनमा फस्टाउँदै अलैँचीखेती #आहा खबर# “चिया खेतीका लागि कृषकहरु उत्साहित भएका छन्” #आहा खबर#
बुधबार, २२ जेष्ठ २०७६,	आहाखबर	1.78K
काठमाडौँ, २२ जेठ ।
नेपाली सिने जगतका महानायक राजेश हमालले आफू जतिखेर पनि राजनीतिमा आउन सक्ने बताएका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकमा दिएको एक अन्तर्वार्तामा हमालले आफू राजनीतिमा जतिबेला पनि राजनीतिकमा आउन सक्ने बताएका हुन्।
भारतको लोकसभा निर्वाचनमा धेरै बलिउड कलाकार निर्वाचित भए। तपाईंको राजनीतिमा आउने सोच छैन?
मलाई राजनीतिमा चासो छ। राजनीतिक गतिविधि रुचिपूर्वक हेर्छु। तर, सक्रिय राजनीतिमा लागिहालौँ भन्ने मुड छैन्। अहिले कलाकारितामा छु। दुबै ठाउँमा हात हाल्नु ठिक होइन। चुनाव लडेका कतिपय भारतीय कलाकारले पछि मछुतो महसुस गरेको सबैलाई थाहा छ। तर, म राजनीतिमा आउनै नसक्ने भन्ने छैन।
कहिलेबाट आउनुहुन्छ त?
कुन कित्तामा उभिएर राजनीति गर्छु भन्ने पक्का छैन। सचेत नागरिकको हिसाबले राजनीतिमा चासो छ।
तपाईंले चाहनुभयो भने त जुनै पार्टीले पनि टिकट देलान् नि?
मेरो उद्देश्य राजनीतिकको लागि राजनीति गर्ने होइन। त्यस्तो राजनीतिले खासै उपलव्धी दिएँदैन। खाली व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र पूरा हुन्छ। इमानदार भएर राजनीति गरियो भने नीति निर्माण तहमा केही प्रभाव पार्न सकिन्छ। राजनीतिमा लागेर राष्ट्रलाई अझै केही योगदान दिन सक्छु जस्तो लागेको दिन पक्कै राजेश हमाल राजनीतिमा होमिने छ। जतिखेर पनि राजनीतिमा आउन सक्छु। त्यो दिन पनि आउला नि।
चुनाव जित्नुभयो भने पहिलो काम के गर्नुहुन्छ?
देशमा अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार हो। मैले चुनाव जितेको खण्डमा भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्न कोसिस गर्छु। भ्रष्टाचाररहित विकासमा जोड दिन्छु।
बलिउड अभिनेत्री एमी ज्याक्सन बिहेअघि नै आमा बनेपछि ...
राधिका आप्टेले बिहेमा च्यातिएको साडी लगाएपछि ...
कनिकासँग टाढिएका पूर्व युवराज पारस सोनिकासँग नजिकिए
कुलतको नशामा फसेकी थिइन् यी बलिउड अभिनेत्री
जब भारतीय मिडियाले प्रियंका कार्कीलाई प्रियंका चोपडासँग दाँजे ...
यस्ताे छ सलमान खानले दिपिकासँग अहिलेसम्म काम नगर्नुकाे कारण
फेवा किनारामा अन्तराष्ट्रिय कला प्रदर्शनी
यी हुन् क्याट्रिनाको नयाँ प्रेमी ! बलिउडमा फैलियो तरङ्ग
बलिउड अभिनेत्री कंगना रनौतकी दिदिमाथि एसिड प्रहार, यस्तो छ घटना
ट्रेनिङमा व्यस्त बलिउड अभिनेत्री परिणीति
कुमारले भने - मैले हारेको महसुस गरेको थिएँ
बलिउडकाे चर्चित फिल्म 'शाेले'का कालियाको मृत्यु
सलमान खानका पूर्व अंगरक्षकले मच्चाए उत्पात, जाल हालेर लिइयाे नियन्त्रणमा
महानवमीमा खाँडादेवीमा वृहत सांस्कृतिक कार्यक्रम
नायिका थापाको दोहोरो भुमिका रहेको चलचित्र ‘लक्ष्मी रानी’को शीर्ष गीत यस्तो बन्यो
ड्रेसअपका कारण फेरि ‘ट्रोल’को सिकार भइन् करीना
तेजाव आक्रमण पिडित मुस्कानलाई कृती र बरुणको यस्तो सन्देश
लामाे समय भूमिगत भएकी नायिका शिल्पा बल्ल भइन् सार्वजनिक
प्रियंका र सलमानबिच दुश्मनी ! के भनिन् प्रियंकाले ?
चलचित्र ‘धुपौरे’मा अनमोल केसी फाइनल
के बिग बोस १३ मा सहभागी हुँदैछिन् अमिषा पटेल ?
कसरी बनिन् साेनाक्षी मजाककाे पात्र ?
नायिका केकी अधिकारी चढेकाे गाडी दुर्घटना
एलिना बास्कोटाकाे नयाँ म्युजिक भिडियो 'गाह्रो छ' सार्वजनिक (भिडियाेसहित)
साहो नचलेपछि प्रभास तनावमा, आगामी फिल्मको स्क्रिप्ट नै फेरे !
कबिर सिंहको सफलतापछि शाहिद कपुरको पारिश्रमिकमा वृद्धि !
अमिताभ बच्चनलाई दिइयो अक्सिजन सिलिन्डर
‘चपली हाइट–३’ को पोष्टर हलिउड फिल्म ‘इएल क्युरोप’ सँग हुबहु मिलेपछि ...
कसले जिते बलिउडमा यस वर्षकाे उत्कृष्ट अवार्ड ? (सूचिसहित)
संविधान दिवसमा सारङ्गी–आर्केष्टा प्रस्तुत हुँदै
पृथ्वी प्रज्ञा–पुरस्कार शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई !
‘गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्ती बाट उठ...’का गीतकार तमोटसंगको यो कुराकानी
धितोपत्र बजारमा झिनो सुधार, कुन कम्पनीका शेयरधनीले कति कमाए ?
एनटीसीको आकर्षक अफर : १० रुपैयाँमा १०० मिनेट कल, अरू के–के ?
४ उद्योगीको विपक्षमा अदालतको फैसला, महसुल उठाउने बाटो खुल्यो
ट्रम्प र पुटिन नेपाल आए पनि सुरक्षा दिन सक्षम छौं !
कतारले तोक्यो कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक, आउँदो जनवरीदेखि लागु हुने